Midowga Afrika oo arimo khuseeya Soomaaliya ku dhaliilay qaramada midoobay – SBC
Midowga Afrika oo arimo khuseeya Soomaaliya ku dhaliilay qaramada midoobay
Qaar ka mid ah wadamada ku bahoobay ururka midowga Afrika ayaa muujiyey sida ay uga niyad jabsan yihiin sida qaramada midoobay ay ku guuldareysatey in Soomaaliya ay ku soo rogto aag ka caagan duulimaadka diyaaradaha (no-fly zone), isla markaana xanibaad la saaro gaadiidka badda.
Gudoomiyaha golaha amaanka & nabada midowga Afrika Ramtane Lamamra ayaa sheegay in qaramada midoobay ku guuldareysay inay ka jawaabto dalabkoodii 10 bilood ka hor ay ku dalbadeen in xayiraad dhanka badda & hawada ah lagu soo rogo qaybo ka mid ah Soomaaliya si loo joojiyo hubka ku socda kooxaha ka soo horjeeda dawlada KMG ah ee Itaalka daran ee ay qaramada Midoobay taageerto.
Ramtane Lamamra wuxuu sheegay in iyadoo midowga Afrika uu ka dhursugayey mudo 10 bilood ah qaramada midoobay in ay si deg deg ah oo waliba maalmo ah ku hirgaliyeen talaabo in laga qaado wadanka Liibiya.
“Qaar ka mid ah wadamada ururku waxay ka qabaan dareen xaqiiqda u dhaxeysa codsigii jaamacada Carabtu ay ku codsadey in Liibiya lagu soo rogo aag ka caagan duulimaadka, taasi oo mudo shan maalmood oo kaliya uu ku hirgaliyey golaha amaanka” ayuu ku yiri s Lamamra oo saxafiyiinta kula hadlay magaalada Adis Abab ee caasimada Itoobiya wax yar uun ka dib markii uu soo dhamaadey kulan ay halkaasi ku lahaayeen xubno ka socdey golaha amaanka ee qaramada Midoobay & midowga Afrika. Ramtane Lamamra wuxuu muujiyey sida ay uga niyad jabsan yihiin in mudo 10 bilood ah ka dib oo ka soo wareegtey markii ay codsiga u direen qaramada midoobay inaanay ilaa iyo hada waxba ka soo naasa cadeyn, taasi oo uu sheegay inay ka qabaan dareen qaar ka mid ah wadamada Midowga Afrika.
Midowga Afrika wuxuu ku riixayey mudo fara badan qaramada midoobay in ciidamadooda kuufiyada buluuga leh u soo diraan Soomaaliya, kuwaasi oo badala kuwa ka socda midowga Afrika, laakiin waxaa muuqanaysa in qaramada Midoobay ay ka cago jiidayso dalabka Midowga Afrika.
Golaha Amaanka ee qaramada Midoobay waxay goor horeba ciidamo u direen dhawr wadan oo ka mid ah Afrika oo ay colaado ka aloosan yihiin waxaana ciidamo xoogan ay ku sugan yihiin wadamada Congo, Suudaan & Ivory Coast.